Toriteny Alahady 07 Septambra 2014 - Josoa Rakotonirainy
Toriteny Alahady 07 Septambra 2014
Mpitily eo amin’ny firenena
Tia antsika ny Tompo.Tia ny Fiangonany ny Tompo. Izany no nanomezany antsika, amin’ity Alahady anio ity, ny teny telo tonta : Matio 18 :15-20, mifanitsy am-pitiavana ny mpirahalahy (sy mpianadhy na mpirahavavy), ao amin’ny Fiangonana, ka atao eo anatrehan’ny vavolombelona izany, ary eo afovoany Andriamanitra, satria « raha misy roa na telo mivory amin’ny anarany dia eo afovoany Izy » (Matio 18 :20).Izany no maha-zavadehibe ny vavaka atao isaky ny mivory (Sampana, Birao , Komity sns). Romana 13 :8-10, ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, fa ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ezekiela 33 :7-9, Andriamanitra maniraka olona ho mpitily, eo amin’ny vahoaka, eo amin’ny firenena, eo amin’ny Fiangonana. Ao amin’ny Septante (dikanteny grika ny Testamenta Taloha), ny teny nampiasaina ilazana ny asa ataon’ny mpitily dia ny matoanteny hoe skepeo=mijery tsara, mitsinjo lavitra, manara-maso. Avy amin’io no nakana ny stétoscope(fitsapana tosidra), ny téléscope(masolavitra fitondran’ny sambo mpisitrika, hijerana ny eo alohany). Ka ny mpitily dia mijery ny fihavian’ny fahavalo, mba hampiomana ny vahoaka. Misy toejavatra telo mety hitranga :1°) Tsy manao ny asany ny mpitily fa matory. Tonga ny fahavalo mandroba sy mamono. Hadinina amin’ny mpitily ny ran’ny vahoaka 2°)Manao ny asany ny mpitily, efa nanao antso avo izy, nampiomana ny vahoaka ny amin’ny fahavalo tonga.Fa ny vahoaka no tsy taitra, dia tonga ny fahavalo mandroba sy mamono. Matin’ny nataony ny vahoaka . Afaka ny mpitily.3°) Nanao ny asany ny mpitily. Na tonga aza ny fahavalo, voaomana ny vahoaka ka avotra.
Io fahatelo io no toejavatra tsara indrindra.
- Andriamanitra dia manangana mpitily eo amin’ny fiangonany hatrany. Misy fahavalo mantsy ny fiangonana. Ary ny fahavalon’ny fiangonana dia ny fisarahana sy ny fivakisana.
-Izao ny teniko teo anatrehan’ny Birao, izay nivory tamin’ny Alatsinainy 01 Septambra, tao an-tokantranonay, ary ny ampitson’iny Ankatoka, hafahafa, nampieritreritra tamin’ny Alahady 31 Aogositra iny : Tandindomin-doza ity Fiangonana ity, dia ny lozan’ny fisarahana sy ny fivakisana. Tenin’ny mpitily ho antsika rehetra ilay teny nataoko ho hafatra tamin’ny Fiangonana, tamin’ny Alahady 31 Aogositra hoe : « Farany, miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mifamindrà fo, manetre tena » (IPetera 3 :8).
-Izao no teniko teo anatrehan’ny Birao, izay Diakona natao ho naman’ny Mpitandrina avokoa (jereo Faneken’ny Diakona), sy ny Pasteur William Rakotobe, mivady, niara-nivory, tamin’ny Alakamisy 04 Septambra teo : « Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan’ny Fanahy Masina anareo ho Mpitandrina, hiandrasanareo ny Fiangonan’Andriamanitra, izay novidiny tamin’ny rany » (Asan’ny Apostoly 20 :38).
-Araka ireo teny ireo, izay tena tenin’ny mpitily, sarobidy amin’ny Tompo ny Fiangonany, satria novidiny tamin’ny rany.
- Fikambanan’olona eo ambanin’ny fahasoavan’ny Tompo ny Fiangonana. Fa tsy association ny Fiangonana.
-Dietrich Bonhoeffer, mpitandrina loterana allemand, maty martioran’ny fitondrana nazi, dia nanao teny tahatahaka izao : Ny Fiangonana dia tokony hametaka afisy toy izao, eo anoloan’ny varavarany : fikambanan’ny olona tsy tanteraka, ary tsy fikambanan’ny olona tsy manan-tsiny. Izay olona mihevi-tena ho tanteraka, tsy miditra ato ! Dia tohizan’i Bonhoeffer ny heviny : eo amin’ny fotoana hahatsapan’ny olona ny fahalemeny sy ny maha-mpanota azy, ka mila ny famindrampo na ny fahasoavan’Andriamanitra (la grâce de Dieu), dia manomboka eo ny tena Fiangonana. Izany hoe : ny Fiangonana tsy an’ny olona mizahozaho foana, manampatra fahefana na manakorontana noho ny hevitra vohizin’ny avonavona na ny hambompon’olombelona fotsiny. Olona manetritena, manaiky ho tarihan’ny Fanahy Masina, eo ambanin’ny fahasoavan’Andriamanitra ka manaiky hahitsin’ny Tenin’Andriamanitra, milona amin’ny vavaka hatrany.
-Izao no hevitro, araka izay nanendren’ny Foibe FPMA ahy, ho mpandrindra vonjimaika, ity Fiangonana ity :
1°) Isaky ny amin’ny 9 ora alina, mandra-pahatonga ny Alahady 14 Septambre hanaovana ny fidianana Mpitandrina matihanina, aoka hivavaka ny isan-tokantrano, ny isam-batan’olona, mba hiasan’ny Fanahy Masina, hahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra.
2°) Aoka hatambatra hatrany ny fiangonana, mandra-pahavita ny fididianana.
3°) Ny fiaraha-miasa amin’i Pasteur William Rakotobe, fa tsy hahilikilika i Pasteur William, dia izaho no hiantso azy sy hamaritra izay ho anjarany.
Izany rehetra izany dia ho voninahitr’andriamanitra irery ihany.
Alahady 07 Septambra 2014.